The people – The Fifth Estate – Myanma Fifth Estate
Myanma Fifth Estate
Who governs the country ultimately? The people – The Fifth Estate.
Engage with Executive
Engage with Legislature
Engage with Judiciary
Category: The people – The Fifth Estate
ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ကို ဒီနေ့စပြီး စမ်းသပ်လွှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ Open Hluttaw beta version launched today
မြန်မာ့ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရဲ့ ပွဲဦးထွက် ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ဘယ်သူလဲဆိုတာ အလွယ်တကူရှာသိနိုင်ပြီး သူတို့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်စေမယ့် Open Hluttaw platform – ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ကို ဒီနေ့စမ်းသပ်လွှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။
PADE Project begins today
ဒီနေ့ကတော့ မြန်မာ့ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် အဖွဲ့ရဲ့ ပွဲဦးထွက်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ပြည်သူ့အရေးနိုင်ငံ့အရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း (Political Accountability through Direct Engagement – PADE)” စီမံကိန်းရဲ့ ပထမနေ့ ဖြစ်ပါကြောင်း အားလုံးကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ ၂လတာ ကာလတစ်လျှောက်မှာ ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အောင်မြင်ပြီးစီးမှုတွေကိုလည်း အသေးစိတ်ဆက်လက်တင်ပြသွားပါဦးမယ်။
ပြည်သူတွေနဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ စောင့်ကြည့်ကြပါဦး။
စီမံကိန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Downloading Democracy in Myanmar
ဒီနကေ့တော့ မွနျမာ့ပဉ်စမ မဏ်ဍိုငျ အဖှဲ့ရဲ့ ပှဲဦးထှကျစီမံကိနျးတဈခုဖွဈတဲ့ “တိုကျရိုကျဆကျသှယျထိတှခွေ့ငျးဖွငျ့ ပွညျသူ့အရေးနိုငျငံ့အရေးဆိုငျရာ တာဝနျယူတာဝနျခံမှုဖွဈပျေါစခွေငျး (Political Accountability through Direct Engagement – PADE)” စီမံကိနျးရဲ့ ပထမနေ့ ဖွဈပါကွောငျး အားလုံးကို ဂုဏျယူဝမျးမွောကျစှာနဲ့ အသိပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီစီမံကိနျးကို အကောငျအထညျဖျောတဲ့ ၂လတာ ကာလတဈလြှောကျမှာ ဆောငျရှကျသှားမယျ့လုပျငနျးတှနေဲ့ အောငျမွငျပွီးစီးမှုတှကေိုလညျး အသေးစိတျဆကျလကျတငျပွသှားပါဦးမယျ။
ပွညျသူတှနေဲ့ ပွညျသူ့ကိုယျစားလှယျတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးကွိုးစားဆောငျရှကျသှားပါမယျ။ စောငျ့ကွညျ့ကွပါဦး။
Myanma Fifth Estate is proud to mark today as the beginning of our debut project, titled Political Accountability through Direct Engagement – PADE.
We will share you more as we progress over the course of this two months with the planned activities and results achieved.
ဒီနေ့မှာ စတင်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အမျိုးသားလွှတ်တော် နဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်က ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးနဲ့ လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မျက်ခြေမပြတ်သိရှိနိုင်ရုံသာမက သင်ပေးခဲ့တဲ့မဲနဲ့ ဒီနေ့ကစပြီး သင့်ကို ကိုယ်စားပြုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို
ဒီ”ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်” http://MyanmaFifthEstate.org ကနေ
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး သင်တို့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စများ၊ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စများကို တင်ပြကာ လိုအပ် သလို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်စေရေး တိုက်တွန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနမှေ့ာ စတငျတဲ့ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ အမြိုးသားလှတျတျော နဲ့ ကိုယျစားလှယျမြားအားလုံးကို ပွညျသူတှကေို ကိုယျစားပွုတဲ့ပဉ်စမ မဏ်ဍိုငျက ကွိုဆိုလိုကျပါတယျ။
ပွညျသူ့ကိုယျစားလှယျမြားအားလုံးနဲ့ လှတျတျောအသီးသီးရဲ့ ဆောငျရှကျခကျြမြားကို မကျြခွမေပွတျသိရှိနိုငျရုံသာမက သငျပေးခဲ့တဲ့မဲနဲ့ ဒီနကေ့စပွီး သငျ့ကို ကိုယျစားပွုနပွေီ ဖွဈတဲ့ ကိုယျစားလှယျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကို
ဒီ”ပဉ်စမ မဏ်ဍိုငျ” http://MyanmaFifthEstate.org ကနေ
တိုကျရိုကျဆကျသှယျနိုငျမှာ ဖွဈပွီး သငျတို့ရဲ့မဲဆန်ဒနယျတဈခုခငျြးစီနဲ့သကျဆိုငျတဲ့အရေးကိစ်စမြား၊ ပွညျသူအားလုံးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အရေးကိစ်စမြားကို တငျပွကာ လိုအပျ သလို အရေးယူဆောငျရှကျနိုငျစရေေး တိုကျတှနျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ပြည်သူကတင်မြှောက်လိုက်တဲ့ အစိုးရသစ်အတွက်၊ အစိုးရသစ်နှင့်အတူ မကြာမီ လာမည် . . .
အားလုံး မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့၊ ပြည်သူတွေရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ ပြည်သူအားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ဆန္ဒတွေကို ပြည့်မီအောင်
စွမ်းဆောင်နိုင်စေဖို့ဟာ ပဉ္စမမဏ္ဍိုင် လို့ခေါ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
“မြန်မာ့ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်” ဟာ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့၊ ပြည်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့၊ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်တဲ့ “နေရာတစ်ခု”
ဖြစ်ပြီး အစိုးရသစ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာ၊ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမယ့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပွညျသူကတငျမွှောကျလိုကျတဲ့ အစိုးရသဈအတှကျ၊ အစိုးရသဈနှငျ့အတူ မကွာမီ လာမညျ . . .
အားလုံး မြှျောလငျ့စောငျ့စားနတေဲ့၊ ပွညျသူတှရှေေးခယျြပေးလိုကျတဲ့ အစိုးရသဈဟာ ပွညျသူအားလုံးမြှျောမှနျးထားတဲ့ဆန်ဒတှကေို ပွညျ့မီအောငျ
စှမျးဆောငျနိုငျစဖေို့ဟာ ပဉ်စမမဏ်ဍိုငျ လို့ချေါတဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ တာဝနျပဲဖွဈပါတယျ။
“မွနျမာ့ပဉ်စမမဏ်ဍိုငျ” ဟာ ပွညျသူတှကေို ကိုယျစားပွုတဲ့၊ ပွညျသူအားလုံးပါဝငျနိုငျတဲ့၊ ပွညျသူတှကေိုယျတိုငျ ထိနျးကြောငျးမောငျးနှငျတဲ့ “နရောတဈခု”
ဖွဈပွီး အစိုးရသဈကို စဉျဆကျမပွတျ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာ၊ အပွနျအလှနျထိနျးကြောငျးမယျ့ နရောတဈခု ဖွဈလာမှာဖွဈပါတယျ။